Wasiirka Isboortiga JSL oo Sheegay in La Qaban doono Ciyaaraha Gobolada Sanadkan 2012 | Saraar Media Forum Discussion
Posted by admin on July 22, 2012 in News, Somaliland, Sports, Wararka Xiisaha Leh · 0 Comments
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score) Hargeysa, Axad 22 July, 2012- Wasiirka wasaarada ciyaaraha ,dhalinyarada iyo dhaqanka Cali Siciid Raygal, ayaa sheegay in wasaarada ay u diyaar garoobayso sidii sannadkan gudihiisa loo qaban lahaa tartanka ciyaaraha gobolada ,iyada oo arrintaas ay qayb ka tahay qorshaha sannad laha ee wasaarada .
Wasiirku waxa uu hadalkan sheegay mar uu xafiiskiisa uga waramayay Telefiishanka Royal, waxaana uu sheegay in sidii ciyaaraha kala duwan ee dalka loo horumarin lahaa ay ka go’an tahay ,iyada oo la dayactiray garoomada waaweyn ee Magaalooyinka Hargeysa, Berbera iyo Ceerigaabo ,laguna hirgeliyay iskaashi ay sameeyeen dawlada , shirkadaha wadaniga ah iyo hay’addaha dalka ku sugan.
“ Dib u dhis ayaa lagu samaynayay qaar cusubna waa la dhisay , Ceerigaabo iyo Hargeysana waa la dhisay Dahabshiilbaa kan Hargeysa ayuu dhisay oo maalgeliyay , kaa Ceerigaabana hay’ad la yidhaahdo Dai ayaa dhistay , ka Berberana dawlada hoosaa dhistay . Ciyaarahii gobolada waa la qabanayaa ku talagalkayagii sannadkii wax yarbaa ka hadhoo waxa aanu qaban karo waa ay noo cadahay ciyaaraha gobolada ayaa ka mid ah , garoomada dhisamahoodaa ka mida” ayuu yidhi wasiirku .
Waxa kale uu sheegay in wasaarada diyaarisay barnaamij istaraatijyeed oo lagu horumarinayo ciyaaraha dalka ,iyada oo ay maalmihii u dambeeyay socdeen kulamo u dhexeeyay wasiirka iyo madaxda xidhiidhada.
Madaxweynaha Puntland "Faroole" iyo Xubno ka tirsan Golihiisa Wasiirrada oo booqday Saado Cali
NATO says it's winning war against Somali piracy Tweet